Julie's Cheese Sandwich (504g) ~ ICT.com.mm
HomeJulie's Cheese Sandwich (504g)
Julie's Cheese Sandwich (504g)
Contains cereals containing gluten, milk derivatives and soya derivatives. Processed inafacility that also processes peanut, sesame, tree nuts and nut products. ရွှေအိုရောင်သမ်းနေတဲ့ အဝိုင်းပုံ Cracker မုန့်ချပ်ကြားထဲမှာ ချိုမြပြီး အငန်ဓာတ်အနည်းငယ်ပါတဲ့ချိစ်ကို ညှပ်ထည့်ပေးထားတဲ့ Julie’s Cheese... [Learn more]
Brand: Julie'sFilter by: CDSG, Food & Snacks
ရွှေအိုရောင်သမ်းနေတဲ့ အဝိုင်းပုံ Cracker မုန့်ချပ်ကြားထဲမှာ ချိုမြပြီး အငန်ဓာတ်အနည်းငယ်ပါတဲ့ချိစ်ကို ညှပ်ထည့်ပေးထားတဲ့ Julie’s Cheese Sandwich ကွတ်ကီးမုန့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားပါဝင်ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ အာဟာရနဲ့ကစီဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ ကောက်ပဲသီးနှံတွေ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပဲအခြေခံပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
Wheat Flour, Vegetable Oil (Palm Oil), Sugar, Cheese Powder, Glucose Syrup, Leavening Agent: [Disodium Diphosphate (E450(i)), Sodium Bicarbonate (E500), Ammonium Bicarbonate (E503)], Corn Starch, Lactose, Whey Powder, Skimmed Milk Powder, Salt, Soya Lecithin (E322), Yeast, Permitted Flavouring – Butter Flavour.